Akụkọ - Mbido ngwa ngwa nke ụlọ PVC ma ọ bụ ga-agbanwe usoro dị ugbu a nke ụlọ ọrụ ụlọ.
Ọganihu ngwa ngwa nke ụlọ PVC ma ọ bụ ga-agbanwe usoro dị ugbu a nke ụlọ ọrụ ụlọ.
A na-ejikarị PVC eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ala, nke ọkpọkọ na profaịlụ na-anọchi anya ya. Dabere na ọnụọgụ nke ozi Longzhong, na ngwa mgbada nke PVC na 2018, ọnụọgụ nke ọkpọkọ na profaịlụ bụ 27% na 24% n'otu n'otu. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mana enwere ụlọ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ PVC dị ala, nke bụ ụlọ ọrụ PVC flooring. Onu ogugu onu ogugu nke PVC choro si na 3% na 2014 rue 7% na 2020.
Ugbu a, kwa afọ oriri nke ịkwanyere n'ala bụ ihe karịrị 300 nde m2, nke mere ngwa ngwa mmepe nke anụ ụlọ ịkwanyere flooring ụlọ ọrụ, na-etolite anọ ulo oru bases na Beijing, Zhangjiagang, Shanghai na Guangzhou. N'etiti ha, Beijing na-ebubata ngwaahịa ngwaahịa, Zhangjiagang bụ nnukwu ụlọ ọrụ PVC na WPC na China, ebe Beijing na Shanghai na-etinye uche na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ PVC ụlọ na ndị mba ọzọ na ụlọ na mba ofesi, yana mkpokọta mmepụta nke anọ ndị a. mpaghara na-akpata ihe karịrị 90% nke mmepụta ụlọ.
Onu ahia nke ulo di ala, a na-acho anya idochi ulo ndi ozo na ndi ozo
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi mmetụta nke ịnabata ọha na eze, a na-ejikarị ụlọ ala PVC eme ihe na ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, nkwụsị bọs na ebe ndị ọzọ, na ebe obibi dị obere.
E jiri ya tụnyere mba ndị mepere emepe, ọnụ ọgụgụ ahịa nke ala ụlọ PVC na China ka nọ na ọkwa dị ala. Na 2017, ihe China chọrọ maka ụlọ ala PVC bụ naanị 4.06%, ma a ka nwere ọtụtụ ohere maka uto. A na-ejikarị ụlọ PVC nke China eme ihe maka mma ọha na eze, ebe 50% na United States na-eji ụlọ mma. Site na uto nke ego mba, ngwa nke PVC ala ga-abawanye n'ọdịnihu. Ọ na-atụ anya na PVC flooring ga-eji dochie laminate flooring na mejupụtara flooring budata na-esote 5-10 afọ, si otú ukwuu na-amụba ahịa òkè na ihe 8% - 9%.
Mbupụ nke ala PVC na-eto ngwa ngwa
Site na 1.39 nde tọn na 2014 ruo nde 3.54 na 2018, mbupụ mbupụ ala PVC na China amụbaala ugboro 1.5 n'ime afọ ise gara aga, na nkezi uto kwa afọ nke 27%. Ọnụ ọgụgụ nke mbupụ kwa afọ si na US $ 1.972 ijeri na US $ 1.957 na 2014. N'ọdịnihu, na ọganihu na nhụjuanya na teknụzụ na teknụzụ mmepụta nke ụlọ ọrụ ụlọ na-eme ụlọ PVC nke China, a ga-enwekwu mbupụ ala China nke China.
Ala, Pvc Kapetị, Pet Ogbo ulo, Pvc Ogbo flooring, Anu anu ogu anu ulo Pet, Ala Kapetị Roll,